XOG: Saddexdii Arrimood Ee Manchester United Ka Caawiyey Inay Garaacdo Juventus – Page 3 – Cadalool.com
1 Jose Mourinho Oo Dejiyey Qorshe & Farsamo Cajiib ah
Waxaad doonto ku sheeg Jose Mourinho, waxaad doonto ka dheh sidii uu u dabbaal-degay dhamaadkii ciyaarta iyo dhegtii uu isqabtay isagoo u jawaabay jamaahiirta Juventus. Laakiin Jose Mourinho wuxuu qabsaday shaqadiisa, waxaanu caddeeyey in qorshihii iyo farsamadii uu ciyaarta ugu soo talo-galay ay sidooda ugu shaqeeyeen.
Beddelkii uu sameeyey ayaa Mourinho qorshihiisa u toosiyey xilli uu u muuqday in laga adkaaanayo, waxaanu mar kaliya isa soo raaciyey Juan Mata iyo Marouane Fellaini oo noqday ciyaartooyada dhaliyey goolasha ee mahaddeedana lahaa. Juan Mata ayaa toogasho laag xor ah kubadda ku dhex-dhigay goolka Juventus, afar daqiiqadood kaddibna kubbad uu dhinaca bidix kasoo laagay Ashley Young ayaa uu Fellaini madax sii taabsiiyey, waxaana loo yaacay damaashaadka goolka guusha xilli dhamaadka ciyaarta ay ka dhinnayd afar daqiiqadood oo dheeraad ah oo lagu daray.
Beddelka saddexaad ee Jose Mourinho sameeyey oo ahaa Marcus Rashford ayaa fursad caddaan ah oo uu ciyaarta kaga dhigi lahaa 3-1 lumiyey dhamaadkii, marka la isku soo duubana, waxay Manchester United samaysay ciyaar cajiib ah oo tamarta ay ka heshay ay kusii jiri doonto kulamada soo socda.
Saddexdan arrimood ayaa ka caawiyey Manchester United inay guul ka gaadho Juventus oo lagu tilmaamo inay tahay kooxaha sannadkan ku guuleysan karaya Champions League midda koowaad.